Aragtiwanaagsan.com – SOMALILAND MAXEY KAGA DAYAN KARTAA MOSEMBIK IYO RWANDA QALINKII PROF.MOHAMED AHMED FARAH(JAAFAA)
SOMALILAND MAXEY KAGA DAYAN KARTAA MOSEMBIK IYO RWANDA QALINKII PROF.MOHAMED AHMED FARAH(JAAFAA)
Apr 03, 2018 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Qof Muhiim ah, Wararka, Waxbarasho 0
Maxaan ka barankarnaa horumarka wadamada hore uu usoo rogaadiyey dagaaladda sokeeye, jabhaddo iyo qabaail, oo maanta ku talaabsadey muddo yar oo lataaban karo, horumar dhaqaale iyo mid siyaasadeed ba leh?,
Waxaa xaqiiq ah in markasta oo wadan galo dagaal sokeeye in uu ubaahanyahay hogaamiye adag oo leh arigti dheer iyo xeel siyaasadeed oo qotodheer si uu u maareeyo caqabadaha ka dhasha colaada sokeeye ee ku salaysan qabiilka iyo maamulxumida. Waxaa la isku raacsan yahay in Mosembik iyo Rwanda ay nasiib u yeesheen in ay helaan hogamiyeyaal daacad ah lehna aragti dheer oo u suuragelisay muddo yar gudeheed in uu kaga saaro marxaladii adkayd gaarsiyeyna iskufilaansho dhinacya badan taabanaya.
Somaliland waxay soo gashay dagaalo sokeeye ooaan qorsheysneyn. Taasi waxay keentay in ay u kala qeybsamaan qabiil qabiil, kadibna kooxo kooxo ay hogaaminayeen shaqsiyaad aan laheyn aragti qaran oo mideysneyn, muhiimadooda ugu weynina ay ahayd sidii uu midba midka kale u majaxaabin lahaa . Taasi na waxay dhashay in uu dagaalkii sokeeye sii dheeraado ayadoo soo dedijisay burburkii kaabayaasha dhaqaalaha iyo heyadihii dowliga ahaa.
Hadaba maxeynu ka baran karnaa horumarka dalalkaasi ku talaabsadeen, waa Hogaamiye daacad ah, wadninimo leh isla markaana dib u habeeya dhamaan hey’adihii dawladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waa in la helaa heya’do si hufan ula xisaabtama masuuliyiinta ku takri fala xoolaha ummadda oo ay masuulka ka yihiin. Intaas markaan helno ayaan gaadhi karnaa horumarka Mosambik iyo Rwanda ku talaabsadeen oo kale.
Baarlamaanka Kanada oo amaanay doorashooyinkii Somaliland Maahmaahyo-Cusub….!! Kuwii ugu dambeeyey ee sanadkan 2018ka!!